Ciidamada kenya oo ka baxay deegaanka tarako ee gobalka gedo – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ciidamada kenya oo ka baxay deegaanka tarako ee gobalka gedo
Last updated Sep 26, 2017 264 0
ciidamada kenya ayaa saaka ka baxay deegaanka tarako ee gobalka gedo halkaas oo laba sano ka ka badan ay fariisimo ku lahaayeen.
Ciidamada ayaa shalay gelinkii dambe iyo xalay laga dareemayay dhaq dhaqaaq iyo diyaar garow la xariira in ay tarako ka guurayaan ugu dambeyntiina saaka aroortii ayay u dhaqaaqeen dhanka soohdin beenaadka.
Askarta tarako deganaa ayaa difaac u ahaa ciidamada kenya ee qeybta ka ahaa shisheeyaha qabsaday magaalada baardheere laakiin dhawaan ayay ciidanka kenya ka baxeen baardheere taas ayaana keentay in ciidamadaan kale ee tarako deganaa raadkoodi qaadaan.
Xarakada mujaahidiinta alshabaab ayaa isla markiiba la wareegtay gacan ku haynta tarako waxaana halkaa lagu arkayaa ciidamo hubeysan oo gaaf wareegaya.
Bulshada deegaanka tarako ayaa ku faraxsan in culeyska mudooyinkii u dambeeyay dusha ka saarnaa iminka allaah ka dejiyay.
Ciidamadii dhawaan baardheere ka baxay ayaa intii ay sii socdeen la kulmay weeraaro kula duwan oo uga yimid xarakada mujaahidiinta alshabaab.
Waxaa lagu wadaa in sidoo kale kenyaatigu ay ka baxaan deegaanka faxfax dhuun ee gobalka gedo.
Kenya ayaa iyadoo kibir iyo isla weynan ka muuqdo ku soo duushay soomaaliya waxaana xigay xasuuq loo geystay, gaadiid laga gubay iyo kuwo laga furtay iyo ciidamadeeda oo dhanka xaduud beenaaka u sii cararaya.
Waxaa la xasuusan yahay xasuuqyadii ka dhacay fariisimihii kenyaatigu ku lahaayeen ceel cadde iyo kulbiyow oo ka kala tirsan gobalada gedo iyo jubada hoose.